विश्व विद्यालय Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - डा.केसीको समर्थनमा जुम्लामा नेविसंघद्वारा प्रदर्शन
डा.केसीको समर्थनमा जुम्लामा नेविसंघद्वारा प्रदर्शन
जुम्ला । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न माग राख्दै १६ दिनदेखि अनसनरत डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा नेपाल विद्यार्थी संघले जुम्लाको खलंगामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा एमबीबीएस लगायतका स्नातक तहका कक्षाहरु सुरु गर्नुपर्ने डा.केसीमा मागमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेविसंघका केन्द्रिय उपसभापति रामप्रसाद अधिकारी, महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले लगायत जुम्ला नेविसंघका टोलीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
उपकुलपति कोइरालाले विदेश जाने अनुमति लिएका छैनन् : शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले प्रचलित कानूनबमोजिम विदेश जाने अनुमति नलिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले उपकुलपति कोइरालालाई क्यानाडामा आयोजित कार्यक्रममा जान रोक लगाएको विषयमा विज्ञप्तिमार्फत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम त्यसरी विदेश जानुपूर्व तालुक मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेमा कुनै अनुमति नलिएको जनाएको हो । कोइरालालाई यही असार २३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
सूचना प्रविधि शिक्षाको ४९ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने
सुर्खेत । कम्प्यूटर एशोसियशन नेपाल महासंघ 'क्यान' ले सूचना, प्रविधिमा दखलता राख्ने मुलुकका ४९ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसन काठमाडौँको सहकार्यमा एक प्रदेशबाट सातजना पर्ने गरी ‘क्यान नेशनल आइसिटी स्कलरसिप २०७५’ प्रदान गर्ने सार्वजनिक गरेको हो । सम्मलेनमा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज कुँवरले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा सक्षमता देखाउन सक्ने सबै प्रदेशका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
उच्च शिक्षाका नाममा नेपालबाट अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिदै !
काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुक जाने क्रम वर्षेनी बढेसँगै नेपालबाट विदेश जाने रकम पनि बढ्दै गएको छ । शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको अनुमानमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपालीहरूका कारण वर्षेनी सवा खर्ब रूपियाँको हाराहरीमा रकम विदेशीने गरेको छ । तर ,नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक जना अधिकारीले यो आर्थिक वर्ष विद्यार्थीहरूका कारण ४० अर्ब रूपियाँ विदेशिने अवस्था रहेको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
भृकुटीमण्डपमा ३ दिने शैक्षिक मेला आजदेखि सुरु
काठमाडौं । कक्षा १२ र स्नातक तह सकेर उच्चशिक्षा पढ्ने तयारी गरेका विद्यार्थीलाई कलेजहरूको जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबारबाट राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शैक्षिक मेला सुरु भएको छ । ३ दिने मेलामा स्वेदशी र विदेशी गरी १ सयभन्दा बढी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाबारे जानकारी लिन सकिनेछ । काठमाडौं पोस्ट शैक्षिक मेला 'मेगा एडुकेसन फेयर' मा नेपाल र विदेशका कुन कलेजमा के सुविधा छ, के–के विषय पढाइ हुन्छ, कति शुल्क लाग्छ भनेर जानकारी दिइनेछ । राइट इभेन्टको सहकार्य र द ब्रिटिस कलेजको मुख्य प्रायोजनमा मेला आयोजना गरिएको हो  ।	थप पढ्नुहोस्
एलएलबी भर्नामा पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा 'एलएलबी' भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गरिने भएको छ । यसअघि असार १४ गते विद्यार्थी संगठनसँगको छलफलमा कोटा प्रणाली लागू नगर्ने सहमति गरेको कानून संकाय डिनको कार्यालयले पुनः पहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । बिहीबार कानून संकायका डिन प्रा डा ताराप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि कोटा प्रणाली खारेज गर्ने सहमति विद्यार्थी संगठनको दवावमा भएकाले उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
विभिन्न ७ बुँदे माग पूरा नहुदा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको आमरण अनसन जारी
सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल (मप) विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले आमरण असन सुरु गरेका छन् । विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर २० दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको विद्यार्थी संघर्ष समितिले माग पूरा नभएपछि बुधबारदेखि अनसन सुरु गरेको हो । विद्यार्थीहरुले इन्जिनियरिङ संकायलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने, हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ विषयको पूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्ने, गोल्डेन चान्स परीक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
के तपाई एलएलबी पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? आजदेखि भर्ना शुरु
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित एलएलबी प्रथम वर्षको भर्ना विहीवारदेखि शुरु हुने भएको छ । कानून संकायका डिन प्रा.डा. ताराप्रसाद सापकोटाले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विहीबारदेखि विद्यार्थीको भर्ना शुरु गरिने जानकारी गराएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई स्थानीय तहमा राख्न सिफारिस,सच्याउन लबिङ
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी दुई तहका विश्वविद्यालय रहने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले तीन तहको विश्वविद्यालय सिफारिस गरेको छ । त्रिरत्न मानन्धर संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा राख्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
२०१९ मा स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ शुरू हुने
काठमाडौं । नेपालमा पनि सार्वजनिक नीति विषयमा विश्वविद्यालय तहमा पढाइ हुने भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०१९ को पहिलो महिनादेखि स्नाकोत्तर तहमा सो विषयमा पढाइ शुरु गर्न लागेको हो । मानविकी, व्यवस्थापन, कानूनलगायत विषय पनि सो विषयमा समावेश हुनेछन् । विशेषगरी सरकारका विषयगत मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने नीति र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विधि पनि समावेश हुने आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्